Sinento injectors kwama-20 zeplastiki-alawulwa ikhompyutha kunye nomthamo 100-10000 gram. Siye got amasebe 6 kumisa, isebe imveliso, R & D (izinto ezintsha & CAD / CAM sokubumbela), ukungenisa & kwamanye amazwe, urhwebo basekhaya, QC, yokugcina & zokuhamba. Siye got umthamo elungileyo woveliso kunye yokugcina & zokuhamba. Ubuchule yonyaka imveliso tote hits izigidi 8 nakumndilili umthamo yonyaka phezulu kwiitoni 20000.
Umngqele wethu uthi "abantu, Innovation and Quality". Sinethemba lokuba sikwazi ukuseka ixesha elide kunye nobudlelwane kwezoshishino wahlobana abathengi kulo lonke ihlabathi ngenxa ngazwinye.